बाहिर खेल्न गएकी यी बालिकालाइ ३ युवकले उठाएर लगे, फर्किंदा बोलि बन्द, २८ दिन पछि बोलि खुल्दा यसो भनिन् (भिडियो) – Jagaran Nepal
काठमाडौं । कति माया गरेर हुर्काएकी छोरी अचानक हराइन् । भोलीपल्ट उनी फेला परिन् । छोरी त फेला परिन् तर उनले आफ्नै बुवालाई पनि चिन्न छोडिन् । यस्तो अवस्थामा छोरी फेला परेपछि उनका बुवा आमा विछिप्त परे । दागंको देउखुरीवाट हराएकी बालिका भोलीपल्ट फेला परेकी थिइन् ।
उनी हराएपछि परिवारका सदस्यले निकै खोजी गरे । फेला पर्ने वित्तिकै बालिकाको आवाज हराएको थियो । उनी बोल्न खोज्थिन् तर सक्थिनन् । उनले आफ्नै बुवालाई पनि अंकल भनेर सम्बोधन गर्थिन । दिउसो ४ वजे तिर नर्सरीमा घुम्न गएकी थिइन् । त्यो बेला कसैले उनलाई फकाएर लिएर गए । ति ब्यक्ति को हुन् अझै खुलेको छैन ।
उनलाई फेला पारेपछि अहिले यि बालिकाले केही पनि सम्झेकी छैनन् । उनलाई लिएर गएकाहरुका बारेमा पनि उनलाई केही थाहा छैन । आफुमाथि के घटना भएको हो भन्ने पनि उनले सबै विर्सिन । त्यो घटना भन्दा अगाडी आफ्नो जिवनमा भएका सबै कुरा विर्सिएकी छन् । कसले कहाँ लग्यो, उनको जिवनमा के भयो ? भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन । त्यसैले उनलाई के भयो भन्ने परिवारका सदस्यले पनि थाहा पाएका छैनन् । उनले छिन छिनमा आफुले भनेका कुरा अहिले पनि विसन्छिन् ।
परिवारका सदस्यहरुले उनलाई ३ जनाले उठाएर लिएर गएको बताएका छन् । उनीहरुले खेल्न गएकी बालिकालाई उठाएर लिएर आफ्नो घरमा लिएर गएका थिए । ति ब्यक्ति अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । बालिकाले घटना सम्झन नसकेका कारण अनुसन्धानमा पनि समस्या परेको छ । उनीहरुले घरमा लगेर किन राखे ? उनी माथि के घटना भयो भन्ने पनि थाहा हुन सकेको छैन ।
उनी पुरुष देख्ने वित्तीकै डराउँछिन् । आफ्नै बुवालाई पनि अंकल भनेर सम्बोधन गर्छिन । बाबा होइन अंकल हो उनले भन्छिन् । बुवाले आमालाई फोन गरिरहँदा यो मान्छेले हजुरलाई किन फोन गर्छ आमा ? भनेर गाली गर्छिन । छोरीको यस्तो अवस्था हुँदा उपचार गर्ने पैसा नभएर आमाको अवस्था निकै नाजुक भएको छ । छोरी फेला परेपनि आवाज बन्द भयो । अहिले केही युट्युव च्यानल संचालकको सहयोगमा ति बालिकाको उपचार भएको छ । २८ दिन पछि ति बालिकाको बोली फर्किएको छ । उनी बोल्न थालेकी छन् । तर उनले अझै पनि आफु माथि भएको घटनाका बारेमा भने बताउन सकेकी छैनन् । अझै पनि बुवालाई चिन्दिनन् ।